विश्वभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३ लाख २४ हजार ८८९ पुग्यो, झण्डै ५० लाख संक्रमित - simrik khabar
विश्वभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३ लाख २४ हजार ८८९ पुग्यो, झण्डै ५० लाख संक्रमित
७ जेष्ठ २०७७, बुधबार ०८:०९ Nabina Adhikari
जेठ ७, काठमाडौं । विश्वमा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-१९ बाट मृत्यु हुनेको संख्या ३ लाख २४ हजार नाघेको छ । विभिन्न तथ्याङ्क निकाल्ने संस्था वर्ल्डो मिटर्स डट इन्फोका अनुसार बुधबार बिहानसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ३ लाख २४ हजार ८८९ पुगेको छ ।
विश्वमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या भने ५० लाखनजिक पुगेको छ । अहिलेसम्म ४९ लाख ८५ हजार ६५६ पुगेको वर्ल्डो मिटर्सले जनाएको छ । कुल सङ्क्रमितमध्ये १९ लाख ५८ हजार ३०८ उपचारपछि घर फर्किएका छन् । यो निको हुनेको संख्या ज्यान गुमाउनेको भन्दा ६ गुणा बढी हो । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै विश्वभर ९४ हजार बढी नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् भने ४ हजार ५ सय ८९ जनाको मृत्यु भएको छ । मंगलबार बिहानसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ३ लाख २० हजार १२५ थियो भने संक्रमित हुनेको संख्या भने ४८ लाख ९० हजार ६६४ थियो ।
कोरोनाको उद्गम स्थल चीन भए तापनि कोरोना संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी मृत्यु हुनेमा अमेरिका पर्छ । अहिलेसम्म अमेरिकामा ९३ हजार ५३३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । संक्रमितको संख्या भने १५ लाख ७० हजार ५८३ पुगेको छ । संक्रमितमध्ये ३ लाख ६१ हजार १८० भने पूर्णरूपमा निको भइसकेका छन् । अहिले त्यहाँ ११ लाख १५ हजार बढीमा कोरोनाको सक्रिय रहेको छ । संक्रमितमध्ये १७ हजार २४८ अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको नयाँ हटस्पट रूस बनेको छ । अहिलेसम्म रूसमा २ लाख ९९ हजार ९४१ मानिस कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् । कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या भने २ हजार ८३७ पुगेको छ । संक्रमितमध्ये ७६ हजार बढी पूर्णरूपमा निको भएका छन् । अहिले त्यहाँ २ लाख २० हजार बढीमा कोरोना संक्रिय रहेको छ । तीमध्ये २३ सयको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
कोरोनाले भयावह पारेको अर्को देश हो, स्पेन । अहिलेसम्म स्पेनमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ लाख ७८ हजार ८०३ पुगेको छ । स्पेनमा कोरोनाका कारण २७ हजार ७७८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । संक्रमितमध्ये १ लाख ९६ हजार भने पूर्णरूपमा निको भइसकेका छन् । अहिले त्यहाँ ५४ हजारमा कोरोना सक्रिय रहेको छ । तीमध्ये १ हजार १५२ को अवस्था भने गम्भीर रहेको छ ।
ब्राजिललाई पनि कोरोनाले निकै सताएको देखिन्छ । अहिलेसम्म त्यहाँ कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या २ लाख ७१ हजार ८८५ पुगेको छ भने कोरोनाका कारण मृत्यु हुेको संख्या १७ हजार ९८३ पुगेको छ । संक्रमितमध्ये एक लाख ६ हजार पूर्णरूपमा निको भएका छन् । अहिले त्यहाँ १ लाख ४७ हजार बढीको कोरोना सक्रिय रहेको छ । तीमध्ये ८ हजार ३१८ को अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
अमेरिकापछि कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी मृत्यु हुनेमा बेलायत पर्छ । अहिलेसम्म बेलायतमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ३५ हजार ३४१ पुगेको छ । संक्रमितको संख्या भने २ लाख ४८ हजार नाघेको छ । बेलायतमा पूर्ण निको हुनेको संख्या एकदमै कम रहेको छ ।
कारोनाभाइसकका कारण धेरै मृत्यु हुनेमा इटाली पनि पर्छ । अहिलेसम्म त्यहाँ कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ३२ हजार १६९ पुगेको छ । अहिलेसम्म त्यहाँ २ लाख २६ हजार बढी कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् । संक्रमितमध्ये १ लाख २९ हजार पूर्णरूपमा निको भइसकेका छन् । अहिले इटालीमा ६५ हजारमा कोरोना सक्रिय रहेको छ भने ७ सयको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
कोरोनाले भयावह बनाएको अर्को देश हो, फ्रान्स । फ्रान्समा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको १ लाख ८० हजार ८०९ पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या २८ हजार २२ पुगेको छ । संक्रिमतमध्ये ६२ हजार पूर्णरूपमा निको भइसकेका छन् । अहिले त्यहाँ ९० हजार बढीमा कोरोना संक्रिय रहेको छ । तीमध्ये १ हजार ८९४ जनाको अवस्था भने गम्भीर रहेको छ ।
जर्मनीमा पनि कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या १ लाख ७७ हजार ८२७ पुगेको छ । मृत्यु हुनेको संख्या भने ८ हजार १९३ पुगेको छ । अहिले त्यहाँ १४ हजारमा मात्रै कोरोना सक्रिय रहेको छ । संक्रमितमध्ये १ लाख ५५ हजार भने पूर्णरुपमा निको भइसकेका छन् । जर्मनीमा यति निको हुनु भनेको सुखद पक्ष हो ।
टर्कीमा पनि कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या १ लाख ५१ हजार नाघेको छ । अहिलेसम्म त्यहाँ ४ हजार १९९ को मृत्यु भएको छ । संक्रमितमध्ये १ लाख १२ हजार बढी भने पूर्णरूपमा निको भइसकेका छन् । अहिले त्यहाँ ३४ हजारमा कोरोना सक्रिय रहेको छ । तीमध्ये ९ सयको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
इरानमा टर्कीभन्दा कम संक्रमित भए पनि मृतकको संख्या भने बढी रहेको छ । अहिलेसम्म इरानमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ७ हजार ११९ पुगेको छ । अहिलेसम्म त्यहाँ १ लाख २४ हजार संक्रमित भएका छन् । संक्रमितमध्ये ९७ हजार निको भएका छन् । अहिले त्यहाँ २० हजारमा मात्रै कोरोना सक्रिय रहेको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा पनि कोरोनाको उद्गम स्थल चीनमा भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । अहिलेसम्म भारतमा १ लाख ६ हजार बढी संक्रमित भएका छन् । कोरोनाका कारण ३ हजार ३०२ जनाको ज्यान गएको छ । संक्रमितमध्ये ४२ हजार बढी पूर्ण रूपमा निको भएका छन् । अहिले ६० हजार बढीमा कोरोना सक्रिय रहेको छ ।
पेरूमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या एक लाखनजिक पुगेको छ । अहिलेसम्म त्यहाँ कोरोनाका कारण २ हजार ९१४ जनाको मृत्यु भएको छ । कुल संक्रमित
पेरूमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या एक लाखनजिक पुगेको छ । अहिलेसम्म त्यहाँ कोरोनाका कारण २ हजार ९१४ जनाको मृत्यु भएको छ । कुल संक्रमितमध्ये ३६ हजार बढी पूर्णरूपमा निको भएका छन् । अहिले त्यहाँ ६० हजार बढीमा कोरोना सक्रिय रहेको छ ।
कोरोनाको उद्गम स्थल चीनमा भने अहिले ८७ जनामा मात्रै कोरोना सक्रिय रहेको छ । त्यहाँ ७८ हजार २४४ जना भने पूर्णरूपमा निको भइसकेका छन् । चीनमा अहिलेसम्म कुल ८२ हजार ९६५ जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ । चीनमा कोरोनाका कारण ४ हजार ६३३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
नेपालमा भने अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या ४०२ पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या २ रहेको छ ।
आज – ०७ जेठ २०७७ बुधवार को राशिफल
नेपालमा अम्फान चक्रवातको अप्रत्यक्ष प्रभाव, सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुरोध
१९ जेष्ठ २०७७, सोमबार १४:४० Deependra Bhattarai 0
एशियाली विकास बैंकले नेपाललाई ३० अर्ब सहयोग
एशियाली विकास बैंकले नेपाललाई ३० अर्ब सहयोग १७ वैशाख, काठमाडौं ।एसियाली विकास बैंक(एडीबी) ले कोरोना भाइरस...
Featured Uncategorized अर्थ /वाणिज्य
१९ जेष्ठ २०७७, सोमबार १३:११ Nabina Adhikari 0
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ५ अर्ब रुपैयाँ निकासा
जेठ १९, काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्र ५ अर्ब रुपैयाँ निकासा...
१९ जेष्ठ २०७७, सोमबार १२:४४ Nabina Adhikari 0
नेपाली कांग्रेसले रुकुम घटनाको छानबिनका लागि दलित सांसदको नेतृत्वमा संसदीय समिति बनाउन माग
जेठ १९, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसले रुकुम घटनाको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन...
१८ जेष्ठ २०७७, आईतवार १४:५४ Deependra Bhattarai 0
ईलन मस्क दुई नासा अन्तरिक्ष यात्रीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस स्टेशन कक्षामा पुर्याएर अर्को इतिहास रच्दै।
जेठ १८, काठमाडौं । शनिबार ३ बजेर २२ मिनेटमा फ़्लोरिडाको केनेडि स्पेस सेन्टरबाट स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन ले उड़ान गरेको छ। नासासंगको सहकार्यमा भएको यस प्रक्षेपणमा अमेरिका २ अंतरिक्षि यात्री बब बेहनके र डग हर्ली समबेस छन। यी २ अन्तरिक्ष यात्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस स्टेशन (आईएसएस) सम्म पूर्याउने ज़िम्मा...
Featured अन्तराष्ट्रिय सुचना / प्रबिधी
१९ जेष्ठ २०७७, सोमबार ११:५८ Nabina Adhikari 0
ह्वाइटहाउस अगाडी उग्र प्रदर्शन गरेपछि राष्ट्रपति ट्रम्पलाई अन्डरग्राउन्ड बंकरमा लगिएको खुलासा
ह्वाइटहाउस अगाडी प्रदर्शनकारीहरु उग्ररुपमा प्रस्तुत भएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पलाई केहीबेर अन्डरग्राउन्ड बंकरमा लगिएको खुलासा भएको छ ।...
१८ जेष्ठ २०७७, आईतवार १६:०३ Nabina Adhikari 0
अमेरिकी छोटो दूरीका धावक बबी जो मोरोको निधन
अमेरिकी छोटो दूरीका धावक बबी जो मोरोको ८४ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उनले १९५६...
Featured अन्तराष्ट्रिय खेलकुद
जेठ १८, काठमाडौं । शनिबार ३ बजेर २२ मिनेटमा फ़्लोरिडाको केनेडि स्पेस सेन्टरबाट स्पेस एक्स क्रू...
७ जेष्ठ २०७७, बुधबार ११:१२ Nabina Adhikari 0
आईओसीले टोकियो ओलम्पिकका लागि छनोट प्रतियोगिताको मिति तय गर्न निर्देशन
जेठ ७, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी)ले टोकियो ओलम्पिकका लागि छनोट प्रतियोगिताको मिति तय गर्न...
Copyright © Simrik Khabar